နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးစုပ်ခြင်းကားအဘယ်နည်း။ - Oscရာဝတီ
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်အတွက်ကြယ်ငါးစုပ်ခြင်းကားအဘယ်နည်း။
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မွေးနေ့ Horoscope
အပေါ်မွေးဖွားတဲ့ Scorpio အဖြစ်နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်, သင်၏ရှက်, အနုပညာနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သဘာဝကသင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးသတ်မှတ်။ အခြားသူများကအာရုံစိုက်ရန်အဓိကထားလိုကြသော်လည်းထင်ရှားကျော်ကြားမှုကသင့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေသည်။ ရှက်စိတ်သည်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်နှင့်အညီသင်သည်သင်၏အလုပ်ကိုသီးသန့်ပြုလုပ်ပြီးသင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီရန်အလွန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ။
သင်မွေးဖွားသည့်လကသင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြသည့်အရာများကအပြန်အလှန်ဖော်ပြသည့်အချက်အလက်များဇန်နဝါရီလတွင်မွေးဖွားသောဇန်နဝါရီလကလေးများသည်ကြီးပြင်းလာသောအခါဇန်န ၀ ါရီလတွင်မွေးဖွားလာသောအခါရည်မှန်းချက်ကြီးသူများဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အခြားသူများအကြောင်းလေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့လာခြင်းဇန်န ၀ ါရီလကလေးငယ်များသည်လည်းလူသားချင်းများကိုသင်ကြားပေးရန်နှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုးတက်စေရန်ကူညီရန်အလွန်ပြင်းပြသောဆန္ဒရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာမွေးဖွားလာရင်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့ဟာအနုပညာနဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေကအရမ်းမတ်တတ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမွေးဖွားသူတွေဟာလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်သူများဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံပုန်ကန်တတ်ကြတယ်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သူတို့လိုချင်သောအရာတို့ကိုသိပါ။ ဖေဖော်ဝါရီလကလေးများသည်ရံဖန်ရံခါရန်လိုတတ်ကြသော်လည်းမတ်လတွင်မွေးဖွားသူများသည်မတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့သူများဖြစ်ခဲ့လျှင်များသောအားဖြင့်ပိုမိုကြမ်းတမ်းစွာဆက်ဆံတတ်ကြသည် မတ်လကမွေးဖွားသူတွေဟာယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တယ်။ ယုံကြည်မှုပျက်သွားသည်အထိမှန်သည်၊ ထိုအလောင်းအစားများအားလုံးသည်မတ်လကလေးများသည်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရကြသည်။ Aprilပြီလမှoffပြီလတွင်ကလေးများသည်များသောအားဖြင့်အားကစားများဖြစ်ကြပြီးalwaysပြီလတွင်ရှိသူများကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မွေးဖွားလာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာသူများလည်းဖြစ်သည်။ theirပြီလမှာမွေးဖွားလာတဲ့လူအများစုကAprilပြီလမှာမွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာလှုပ်ရှားမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများစွာရှိနိုင်ပါတယ်။ မေလမှာမွေးဖွားသူများစွာဟာအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ဘယ်ဘက် ဦး နှောက်ကိုသူတို့ရဲ့ညာဘက် ဦး နှောက်ထက်ပိုသုံးပါ။ ဆိုလိုတာကသင်ဟာနံပါတ်များနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအချက်အလက်များထက်သင်ဟာပိုပြီးယုတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါ။ သင်အိပ်နေစဉ်မှာအိပ်မက်တွေမက်ခဲ့တယ်၊ မေလမှာမွေးဖွားခဲ့ရင်မင်းအနာဂတ်အတွက်လည်း တစ်နေ့တာအတွက်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ညအချိန်တွင်ကြီးမားသောအိပ်မက်။ ဇွန်လဇွန်လကလေးငယ်များသည်အလွန်ထိလွယ်ရှလွယ်သည်။ ဇွန်လတွင်မွေးဖွားလာသူတစ် ဦး ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသော်လည်း၊ သူတို့ကယဉ်ကျေးသောဇွန်ကလေးငယ်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကြောင့်၊ သင့်အားသိစေချင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည်အကြံဥာဏ်များကိုအလေးအနက်ထားကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဇွန်လကလေးဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကဲ့သို့တူညီသောအရာမျိုးကိုနှစ်သက်လိုလျှင်၊ အခြားသူများကိုဘေးဖယ်ထားလိုပါက၊ သင်ဇူလိုင်လတွင်မွေးဖွားလာပါကစွမ်းအင်ပြည့်ဝနေပြီဆိုလျှင်အခြားသူများကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောပါ၊ သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတွေ့မြင်ပါ။ သူတို့ကိုသင်နှင့်စကားပြောပါ၊ သင့်အားတစ်ခုခုပြောပါ။ သင်သည်သြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါကသြဂုတ်လတွင်မွေးဖွားလာပါကပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောပြန်လာခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ဒုတိယစက္ကန့်သာကြာပါသည်။ စက်တင်ဘာစက်တင်ဘာလကလေးများသည်အလွန်အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါကသင်သည်ပြည့်ဝစုံလင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်၊ သင်သည်အရာရာကိုပြီးပြည့်စုံစွာထားရန်လိုအပ်သည်၊ စက်တင်ဘာကလေးများအလွန်မျှော်လင့်ထားကြသည် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသူများ၏မျှော်လင့်ချက်များမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကမအောင်မြင်လျှင်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာအောက်တိုဘာကလေးငယ်များသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးဂရုမစိုက်ကြပါ။ သူတို့သည်အလွန်လွတ်လပ်ကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်စက်တင်ဘာလတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါကသင်သည်တောက်ပသောဘက်ကိုမကြာခဏမြင်တွေ့ရသည့်အခါတောက်ပသောမျက်နှာကိုမကြာခဏကြည့်နိုင်သည်။ အောက်တိုဘာလတွင်မွေးဖွားသောလူအများတို့သည်အောက်တိုဘာလကလေးများပျော်စရာကောင်း။ စကားပြောတတ်သောကြောင့်သင်သွားလေရာရာ၌လှပမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုများစွာဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အကယ်၍ သင်သည်နိုဝင်ဘာလတွင်မွေးဖွားပါကနိုဝင်ဘာလတွင်မွေးဖွားပါကသင်၏မွေးဖွားလကသင့်အကြောင်းမွေးဖွားလာသည့်အရာများနိုဝင်ဘာကလေးများအကြောင်း များသောအားဖြင့်နို ၀ င်ဘာလကလေးကိုတကယ်အာရုံစူးစိုက်သည့်အခါအလွန်ခေါင်းမာပြီးအလွန်လျှို့ဝှက်သည်။ မကောင်းမှုကြီးမြတ်မှုအတွက်အလားအလာ အကယ်၍ သင်သည်နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကသင်သည်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောနိုဝင်ဘာကလေးများဖြစ်လျှင်တစ်စုံတစ် ဦး တစ်ယောက်မှအကူအညီမလိုချင်ပါ။ နို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကနို ၀ င်ဘာလတွင်မွေးဖွားလာပါကဒီဇင်ဘာဒီဇင်ဘာလကလေးများဖြစ်လိုလျှင်သာ လူတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာဒီဇင်ဘာလမှာမွေးဖွားလာရင်အိမ်မှာတက်တက်ကြွကြွထိုင်ပြီးမကြည့်တဲ့တီဗွီကိုကြည့်ရတာစိတ်ထဲစွဲမှတ်စရာကောင်းတယ်။ မင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်လက်ဖက်ရည်ဒီဇင်ဘာလကကလေးတွေကမင်းကိုအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ မင်းကတစ်ခုခုကြောင့်မင်းကိုတားဆီးတဲ့အခါဘာတစ်ခုမှမတားဆီးချင်ဘူး၊ မင်းကိုပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြfightingနာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီလဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ ribe သည်အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အပိုင်း၌ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုရယူရန်
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
သင့်ရဲ့မွေးနေ့နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ကဟုတ်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်ဝိညာဉ်ရေးရာလူတစ် ဦး ။ သင်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေထိုင်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်လုပ်မည်အရာအားလုံးလုပ်နိုင်သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်သေချာစေရန်။ Theနိုဝင်ဘာ ၇ ရက်မွေးနေ့horoscope သင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖြစ်ကြသည်ရှက်တတ်သူလုပ်တယ်အာရုံကိုမကြိုက်ဘူး
အထက်တန်းကျောင်းဇီဝဗေဒတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ကျား၊ မသည်လူတို့တွင်တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသည်ကိုလေ့လာရသည်။ သင်ဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရှိပြီးသင်၏ DNA တွင်အမြစ်တွယ်သည်။ သင်၏ ၂၃ ကြိမ်မြောက်ခရိုမိုဆုန်းစုံတွဲသည် X ခရိုမိုဆုန်းနှစ်ခုသို့မဟုတ် X နှင့် Y တို့ပါဝင်သည်။
ဇာတ်လမ်းရဲ့အဆုံး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းအဲဒီလိုယူဆကြတာပါ။ သို့သော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်မလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အမှန်မှာ၊ ဇီဝဗေဒပညာရှင်များကလိင်သည်ရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့အလယ်တည့်တည့်မှာကျနေတဲ့လူတွေကိုနားလည်ပြီးလေးစားဖို့လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်တယ်။ ငါတို့ကျား၊ မနဲ့လိင်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျား၊ မလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏နားလည်မှုနှင့်သူတို့၏အခန်းကဏ္refersကိုရည်ညွှန်းသည်။ ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးသာရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ်အဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
သင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သောကျား / မမျာသည်သင်၏အဝတ်အစားများနှင့်အပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဖော်ပြနေသည့်အရာများဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်အားလုံးသည်လည်းရောင်စဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်ရှိသည်။ လိင်မှုကိစ္စသည်သင်မည်သူကိုဆွဲဆောင်သည်ကိုဖော်ပြပြီး၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ်တစ်ခုတွင်ရှိနိုင်သည်။ သင်ဤအဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများရှိကြ၏ဘယ်မှာသေချာပေါက်မသတ်မှတ်! ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဇီဝဗေဒ၊ မင်းတို့ရဲ့ခရိုမိုဆုန်းတွေ၊ ဟော်မုန်းတွေ၊
ဤဇီဝဗေဒစရိုက်များသည်အမြဲတမ်းမတူညီပါ၊ အထက်တန်းကျောင်းကျန်းမာရေးလူတန်းစားဇယားများနှင့်အမြဲတမ်းမတူညီပါ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဖြစ်ရန်တစ်ခုတည်း၊ အမှန်တကယ်အားဖြင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အသက်ရှင်သောမွေးဖွားခြင်း၏ ၂% နီးပါးသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏မွေးရာပါအခြေအနေများနှင့်မွေးဖွားခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၄ င်းတို့၏ခရိုမိုဆုန်းများ၊ ဟော်မုန်းများ၊ ဂနိုနတ်များသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါများမှလူတစ် ဦး သည်လိင်မှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု (သို့) DSDs တွင်ကွဲပြားမှုရှိသောယောက်ျားလေးသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၌လူအများမျှော်လင့်ထားသည့်အရာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုဆိုလိုသည်။
2% နီးပါးသည်အသံနှင့်မတူနိုင်သော်လည်း DSD နှင့်လူ ဦး ရေသန်း ၁၃၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်တစ်နိုင်ငံတည်း၌နေထိုင်ပါက၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် DSD များသည်အမြဲတမ်းတွေ့မြင်ရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ လူတွေကသူတို့ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာဗေဒကြောင့်ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးပြီးသူတို့ရဲ့အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကကွဲပြားခြားနားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောနေတာကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုကုန်ဆုံးနိုင်တယ်။
ခင်ဗျားတို့မြင်ကြတာကမင်းရဲ့ကျား၊ မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိင်ကွဲပြားမှုနှစ်ခုလုံးရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဌာန်းခွင့်သည်သင်ရရှိသောခရိုမိုဆုန်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်လိင်ကွဲပြားမှုအတွင်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်မည်သို့ဖြစ်သွားသည်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည် - သင်၏လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာစရိုက်များကိုသင်ဖွံ့ဖြိုးစေသောလုပ်ငန်းစဉ်။
ပြီးတော့သင်ထင်နိုင်သည့်အရာနှင့်ဆန့်ကျင်။ သင်သည်မွေးဖွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ထိုကွဲပြားခြားနားမှုသည်ရပ်တန့်သွားခြင်းမရှိချေ။ သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်လူတို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အချိန်ကာလများစွာရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာရလဒ်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရလဒ်များကိုမြင်နိုင်သောခန္ဓာဗေဒသို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များဟုခေါ်ဆိုသောဖိုနိုဖစ်ပုံစံကို အခြေခံ၍ အကွက်နှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည်။ Phenotypic အမျိုးသားတွေမှာ ၀ တ်ရည်နဲ့လိင်တံရှိတယ်။ phenotypic အမျိုးသမီးတွေကသားဥအိမ်၊ သားအိမ်၊ ယောနိ၊ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာတော့လိင်ကွဲပြားမှုကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့အသုံးပြုတဲ့စရိုက်လက္ခဏာကတကယ်တော့ဒွိဟမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားသို့မဟုတ်မိန်းမဟုခေါ်သောအရာ၌ကွဲပြားမှုများစွာရှိပြီး၊ ပုံမှန်ဖြစ်သည့်ထပ်တူကျမှုများစွာလည်းရှိသည်။ ခန္ဓာဗေဒအရတစ်စုံတစ် ဦး သည်အပြင်ပန်းမှမိန်းမကိုယ်ပုံစံကိုကြည့်သည်၊ သို့သော်သားဥအိမ်မရှိခြင်း၊ သားအိမ်မရှိခြင်း၊ ပြီးတော့မျိုးရိုးဗီဇကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရိုမိုဆုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေက Xs နှစ်ခု၊
X နှင့် Ys တွင်မျိုးရိုးဗီဇကိုဆုံးဖြတ်ရန်အထောက်အကူပြုသည့်မျိုးရိုးဗီဇများပါရှိသည်။ Y ခရိုမိုဆုန်းသည်သင်မျိုးပွားခြင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုတီထွင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်မျိုးရိုးဗီဇများဖြစ်သည်။ ကြက်ဥများသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးရလဒ်များစွာထွက်ပေါ်စေသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ် (အတိုကောက်ဗားရှင်း) တွင်အထူးပြုဆဲလ်များသည်အခြေခံအားဖြင့်ပုံတူပွားပြီးနောက်မိဘ၏မျိုးရိုးဗီဇများ၏ထက်ဝက်ရှိသောမျိုးပွားဆဲလ် (gametes) ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဌာနခွဲနှစ်ခုသို့သွားသည်။ ဒါကြောင့်ခရိုမိုဆုန်း ၂၃ လုံးကိုလုပ်တယ်။
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခရိုမိုဆုန်းများသည်အတိအကျ ၂၃ မျိုးခွဲခြားခြင်းမခံရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာလူနှင့်အဆုံးသတ်နိုင်သော X နှင့် Y ပေါင်းစပ်မှုများဖြစ်နိုင်သည်။ လူသားများသည် X (၃) ခု (သို့မဟုတ်) X နှင့် Ys နှစ်မျိုးကိုအမွေဆက်ခံနိုင်သည်။ ဤလူများသည်များသောအားဖြင့်ပျမ်းမျှထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
X သုံးမျိုးရှိသူများသည်ပါးလွှာပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်မသန်စွမ်းမှုများနည်းပါးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် X နှင့် YYs ရှိသူများသည်သူတို့၏ system တွင် testosterone ဟော်မုန်းကြောင့်ပိုမိုဝက်ခြံထွက်လေ့ရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်လူများသည်အပြည့်အဝမွေးဖွားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ထိုအခါသင် Turner Syndrome သည်သင် X ကိုရသည့်အခါတွင်ဖြစ်တတ်သည်။ ၎င်းသည်inတ္လက္ခဏာများကို ဦး တည်စေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်တိုတောင်းလေ့ရှိပြီးအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်းမပြုသော်လည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းမှုနှင့်မြုံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထို့အပြင် Xs နှင့် Y နှစ်မျိုးမှဖြစ်ပေါ်လာသော Klinefelter ရောဂါသည်အသုံးအများဆုံးခရိုမိုဆုန်းပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အထီးကလေး ၆၀၀ တွင် ၁ ယောက်တွင်ဖြစ်ပွားပြီး testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်မပြည့်စုံသော testicular ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများမှာသေးငယ်လွန်း။ လူတစ် ဦး အားနောက်ပိုင်းတွင်ရောဂါမပြနိုင်သေးပါ။ ယခုတွင်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိသင်၏ဆဲလ်အားလုံးသည်တူညီသောခရိုမိုဆုန်းဖွဲ့စည်းမှုရှိသည်မဟုတ်ဟူသောအချက်လည်းရှိသည်။ ဘယ်လဲ၊ ငါအထက်တန်းကျောင်းမုသာစကားကိုသာလေ့လာသင်ယူခဲ့သလား သို့သော်အမှန်မှာ - mosaic ရှိသူတစ် ဦး သည်ဓာတ်မြေသြဇာတစ်ခုတည်းမှမွေးဖွားနိုင်သော်လည်းမျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားခြားနားသောဆဲလ်များကိုအစုစပ်ထားနိုင်သည်။
ပြီးတော့မျိုးရိုးဗီဇဓာတုဖြစ်သူမှာသားအိမ်ထဲကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဓာတ်မြေသြဇာကြက်ဥဆဲလ်နှစ်ခုကနေကြီးထွားလာလို့မတူညီတဲ့ဆဲလ်တွေရှိတယ်။ နှစ်ခုလုံးမှာမတူညီတဲ့လိင်ခရိုမိုဆုန်းတွေနဲ့ဆဲလ်အရောအနှောရှိနိုင်တယ်၊ အဲဒီဆဲလ်တွေဖြန့်ဖြူးမှုအပေါ်မူတည်တယ်။ နှင့် chimerism စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးကျား, မဝိသေသလက္ခဏာများသို့မဟုတ်အထီးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမျိုးပွားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို ဦး တည်သွားစေနိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနှင့်သူတို့၏သန္ဓေသားလောင်းများသည် microchimerism ဟုလူသိများသောအချင်းချင်း၊ ပင်စကလာပ်စည်းများကိုမကြာခဏလဲလှယ်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာခရိုမိုဆုန်းသည် 'အမျိုးသမီး' သည် XY ဆဲလ်များကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးသူ့သားတွင် XX ဆဲလ်များရှိနိုင်သည်။
လေ့လာမှုအချို့အရဤဆဲလ်များသည် X နှင့် XY ခရိုမိုဆုန်းများရှိသူများနှင့်လည်းလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသူများအနေဖြင့်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျား၊ မကွဲပြားခြားနားမှုတွင်အနည်းဆုံးမျိုးဗီဇ ၂၅ ခုသည်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဗီဇ၏ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှစ်မျိုးလုံးသည်ကွဲပြားမှုများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လိုအပ်သောမျိုးဗီဇများကို X ခရိုမိုဆုန်းပေါ်တွင်လဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားလိင်သတ်မှတ်သည့်မျိုးဗီဇမျိုးစုံကိုသို့မဟုတ်မျိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းကိုအခြားခရိုမိုဆုန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဘုံစားကျက်စားသောအရာများအဖြစ်အမွေဆက်ခံနိုင်သည်။ ၆ ပတ်ပတ်လောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက်ဒီဗီဇအားလုံးဟာတကယ့်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်လာတယ်။ ခြောက်ပတ်ကြာပြီးနောက်မှာသန္ဓေသားလောင်းဟာကျောက်ကပ်ဘေးမှာ gonadal rgeges လို့ခေါ်တဲ့အဖုအပိမ့်တွေထွက်လာတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကသားဥအိမ်ဒါမှမဟုတ်ဝှေးစေ့တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။
ဤသန္ဓေသားတွင်သန္ဓေသားလောင်းသည်ပြွန်နှစ်စုံရှိသည်။ အခြားအစုတစ်ခုသည် epididymis, vasdeferens နှင့် seminal vesicles ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိနေစဉ်တစ်ခုသည်သားအိမ်နှင့် fallopian ပြွန်များသို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။ မျိုးရိုးဗီဇသည် MALE နှင့် FEMALE တို့ကိုအော်ဟစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းချိန်ခွင်သည်အနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားပါက၎င်းသည်လူတစ် ဦး ကိုလိင်ရောင်စဉ်အောက်သို့ကျစေနိုင်သည်။
SRY ယူပါ။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဤအရာသည်အထီးပရိုဂရမ်မျိုးဗီဇဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အကယ်၍ သူသည် XX ခရိုမိုဆုန်းရှိသူတစ် ဦး အပေါ်သို့ကျရောက်ပါက၎င်းတို့သည်သားဥအိမ်အစားသားဥများမွေးလာစေနိုင်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့သူတို့ရဲ့မျိုးဥထုတ်လုပ်မှုမှာခရိုမိုဆုန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခရိုမိုဆုန်းနဲ့အတူဒီအင်အေအချို့ကိုဖလှယ်တဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ X နှင့် Y ခရိုမိုဆုန်းများသည်ဒီအင်အေဖလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌ယေဘုယျအားဖြင့်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းတို့သည်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် gamete ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအခြားဗီဇပြောင်းလဲခြင်းသည် SRY (သို့) အခြားလိင် - အဆုံးအဖြတ်ပေးသောမျိုးရိုးဗီဇများစွာကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အကြောင်းမှာယင်းသည်အရေးပါသောမျိုးရိုးဗီဇတစ်ခုတည်းမဟုတ်သောကြောင့်တည်း။
ထို့အပြင်သန္ဓေသားအားtraတ္စရိုက်လက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးစေရန်တက်ကြွစွာအားပေးသည့်မျိုးရိုးဗီဇများလည်းရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, WNT4 ဗီဇ testicular ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်သားအိမ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးအားမြှောက်, ထိုသို့မိတ္တူအများအပြားမပြည့်စုံအမျိုးသမီး gonad XY နှင့်အတူလူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ gonads ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လည်းကျားမ - တိကျသောဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦး တည်သောကျားမ - တိကျတဲ့ဟော်မုန်းများထုတ်လုပ်မှုကိုအစပျိုးပေးသည်။
သို့သော်အချို့သောသူများသည်ကျားမကွဲပြားမှုသည် ၄ ​​င်းဟော်မုန်းများကိုတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အပြည့်အဝအန်ဒရိုဂျင်မခံစားနိုင်သည့်ရောဂါလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုမှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ရှိသည့်လူများကိုအမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်းများကမထိခိုက်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်အန်ဒရိုဂျင် receptor ဟုခေါ်သောထိုဟော်မုန်းများနှင့်တွဲဖက်သောပရိုတိန်းတွင်အချို့သောဗီဇပြောင်းလဲခြင်းများရှိသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့တွင် ၀ တ်ရည်နှင့် Y ခရိုမိုဆုန်းများရှိသော်လည်းသူတို့၏ပြင်ပအင်္ဂါများသည်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်ကြားတွင်ဖြစ်သည်။ မွေးရာပါမွေးရာပါ adrenal hyperplasia လည်းရှိတယ်။ ထိုအခါ adrenal gland cortisol နှင့် androgens များထုတ်လုပ်ခြင်းသည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
cromisol ကိုထုတ်လုပ်မှုနည်းသောကြောင့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးပြင်ပအထီးလိင်အင်္ဂါများသို့အန်ဒရိုဂျင်များပိုမိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည် XX ခရိုမိုဆုန်းရှိသူများအတွက်အတွင်းပိုင်းအမျိုးသမီး gonad များနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ ဤအခြေအနေအချို့သည်အပျိုဖော်ဝင်ချိန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင်လုံးဝမပေါ်လာပါ။ တကယ်တော့လူတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသတဲ့ဆေးဝါးကုသမှုကိုမရယူမှီတိုင်အောင်သူတို့ကိုလုံးဝအသိအမှတ်မပြုပါ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဆရာဝန်များသည်အသက် ၇၀ အရွယ်ကလေး ၄ ယောက်ရှိသောဖခင်တစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်ကိုအူရီယိုပြွန်နှင့်အတူသားအိမ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်မွေးဖွားခြင်းမှလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွင်ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဤမွေးကင်းစကလေးများအနေဖြင့်၎င်းတို့ကြီးပြင်းလာသည်နှင့်အမျှခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ကျား၊ မခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါကလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးပါ ၀ င်ပြီးကလေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာလိင်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ခြားနားချက်တစ်ခုရှိတာမို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။
ခရိုမိုဆုန်းကိုကြည့်ခြင်းသည်မကြာခဏမလုံလောက်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဟော်မုန်းစစ်ဆေးမှုနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ကလေး၏ဆရာဝန်များသည်ကုသမှုလိုအပ်လျှင်ဘာကိုလိုချင်သည်ကိုနားလည်ထားသည့်တိုင်ပင်စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်ထားသောလိင်အင်္ဂါမပါဘဲကြီးပြင်းလာခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာကိုဖြစ်စေသည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့်ကလေးများကိုကျားမခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမသိဘဲကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်။ ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုဘယ်လောက်များများလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတာတောင်မသိနိုင်သေးဘူး။
ဤခွဲစိတ်ကုသမှုများသည်လူနာများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအတိအကျသိရန်လည်းခဲယဉ်းသည်။ လူကြီးများအနေဖြင့်လူနာများအနေဖြင့်နာကျင်မှု၊ DSD ရှိသူများအနေဖြင့်ကျားမစိတ်မကောင်းဖြစ်မှုနှုန်းမြင့်မားကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကျားမခွဲစိတ်မှုနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြselfနာများအကြားဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုများဟာဘဝနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ကျန်းမာရေးပြtoနာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သို့ရာတွင်၊ လူများအနေဖြင့်မိဘများကိုလက်ခံပြီးထောက်ခံအားပေးတတ်သောမိဘများရှိပါကထိုသို့သောပြproblemsနာများမှာနည်းနိုင်ခြေနည်းကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုသည်ဆေးပညာအရလိုအပ်ပြီး၊ Urethra ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းသည်မျိုးပွားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် (သို့) အန်ဒရိုဂျင်မခံစားနိုင်သည့်ရောဂါလက္ခဏာစုတွင် testicular ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သို့သော်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဤခွဲစိတ်ကုသမှုများကိုကလေးငယ်များအတွက်ပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ အမှန်မှာ၊ များသောအားဖြင့်မွေးဖွားချိန်တွင်လိင်အင်္ဂါခန္ဓာဗေဒ၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့လူတစ်ယောက်သည်သူမကိုယ်ခန္ဓာနှင့်မည်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်တူသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်ခွဲစိတ်ကုသမှုနည်းလမ်းမှဝေးကွာသွားသည်။ အကယ်၍ DSD ကိုမွေးဖွားချိန်တွင်တွေ့ရှိပါကကုသမှုတွင်ခွဲစိတ်ခြင်းထက်ကုထုံးနှင့်ဟော်မုန်းအစားထိုးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ မကြာခဏ DSD အဖွဲ့သည်မျိုးရိုးဗီဇပညာရှင်များ၊ endocrinologists နှင့်စိတ်ပညာရှင်သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါအထူးကုများပါ ၀ င်သည့်စောင့်ရှောက်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။
၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများကိုချက်ချင်းနှင့်ဆေးကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်သည်ကိုမိသားစုအားဆုံးဖြတ်ရန်သင်ကူညီပြီးကလေးဘဝတလျှောက် DSD နှင့်သူတို့၏မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ကူညီရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤစောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားကိုနေရာတိုင်းတွင်မရနိုင်ပါ။ သုတေသီများသည်အချိန်နှင့်အမျှလိင်နှင့်ကျားမနှစ် ဦး စလုံး၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်ကလေးများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကျား၊ မရေးရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုစတင်နားလည်လာရန်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာနားလည်လာရန်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
သို့သော်သုတေသီများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆိုင်ရာနားလည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ယေဘူယျဆွေးနွေးမှုများနှင့်နားလည်မှုများကို ပိုမို၍ တိကျမှုရှိအောင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်ကမ္ဘာကြီးတွင်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလိင်သည်မရိုးရှင်းသည့်အရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုနားလည်ရန်ရှည်လျားသောလမ်းရှိနေသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တိုးတက်နေပါသည်။
ငါတို့မသွားမှီငါတို့ Patreon ရှိကျွန်ုပ်တို့၏နာယကများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ သူတို့၏ထောက်ခံမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲသောပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်နာယက, ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Patron Community သို့ Patreon.com/SciShow တွင်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်
၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်၊
နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်သည်ကင်းမြီးကောက်လော။
နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်အတွက်ရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာ,2007: Scorpio၇ ။ 2007 ။
များအတွက်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်ကင်းမြီးကောက်s ကို Pisces သို့မဟုတ်အခြားဖြစ်ပေါ်လာသည်ကင်းမြီးကောက်လီယိုနှင့် Aries အချို့ကိစ္စများတွင်လျော့နည်းအကျိုးရှိသောပွဲများဖြစ်နိုင်သည်သော်လည်း။ သို့သော်မင်းသမီးအဘယ်သူသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့လျော့နည်းသဟဇာတနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုနှင့်အတူရောနှောရောနှောတွေ့ရှိရသင့်တယ်စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။
အများဆုံးသဟဇာတဆိုင်းဘုတ်များကင်ဆာယေဘုယျအားဖြင့် Taurus, Virgo, Scorpio နှင့် Pisces ဟုမှတ်ယူသည်။ အနည်းဆုံးသဟဇာတဆိုင်းဘုတ်များကင်ဆာယေဘုယျအားဖြင့် Aries နှင့် Libra ဟုသတ်မှတ်ကြသည်။ နေလက္ခဏာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကအထွေထွေအယူအဆကိုပေးနိုင်သည်လိုက်ဖက်တဲ့။
အားနည်းချက်သူတစ်ပါးကိုမယုံကြည်ဘူး၊ မနာလို၊ကင်းမြီးကောက်likes: အမှန်တရား၊ အမှန်တရား၊ မှန်ကန်ပြီးတိကျမှန်ကန်မှု၊ မိတ်ဆွေကောင်းတစ် ဦး၊ ထူးကဲသောစိတ်အားထက်သန်မှု။
၁၂/၁၃ရေငတ်- Scorpio & Taurus
Scorpio သည်မည်သူ့ကိုမျှပြန်လည်ဖြေကြားရန်မဂရုမစိုက်သောဝေးလံသော Aquarius ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ အခြားသူတစ် ဦး ၏မူများဖြင့်ကစားလိုသောဆန္ဒမရှိခြင်းသည် Scorpio နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Aquarius အဘို့, အခြားရာသီဥတုနှင့်အတူမရရန် Taurus ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဆယ့်တစ် ။ 2021 ။
ဘယ်ရာသီခွင်လက္ခဏာတွေပါလဲစိတ်ရောဂါ? သောရာသီဥတုဆိုင်းဘုတ်များစိတ်ရောဂါTaurus, Cancer, Virgo, Capricorn နှင့် Pisces တို့ပါ ၀ င်သည်။၁၀ ။ 2020 ။